Thursday December 28, 2017 - 22:49:53 in Wararka by Mogadishu Times
Sanadkan waxaa Soomaaliya ka dhacay dhacdooyin argagax leh sida weerarro, duqeyn iyo qaraxyo badan, kuwaasoo uu ka mid ahaa qaraxii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca qaaradda Afrika. Bishii January,waxaa dhacay 3 qarax oo waaweyn oo labo mata
Sanadkan waxaa Soomaaliya ka dhacay dhacdooyin argagax leh sida weerarro, duqeyn iyo qaraxyo badan, kuwaasoo uu ka mid ahaa qaraxii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca qaaradda Afrika. Bishii January,waxaa dhacay 3 qarax oo waaweyn oo labo mataano ahaayeen, sida qaraxyadii January 2, 2017 ka dhacay afaafka hore ee Xalane oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, Tarabuunka oo 3 dhimasho ah iyo 17 dhaawac ah la diiwaan-geliyay iyo midkiiJanuary 25, 2017 ka dhacayHotel Dayax kaas oo ay ku dhinteen 28 qof iyo 51 kale ku dhaawacmeen.
Bisha Febraayo,waxaa ugu naxdin badnaa qarax February 19, 2017 ka dhacay Kaawo-godey, 30 ayaa dhimatay, 40 kale dhaawac, waxaa kale bishaasi dhacay qarax gaari oo ka dhacay Banaadir, qarax loo geystay Hotelka Village ee Boosaaso, dilka C/raxmaan Kilwa ee Maxkamadda Mudug, dilal loo geystay nabaddoonnada Bashiir Maxamed Cali (Xagaley), Nabaddoon Cabdi Cumar Ibraahim iyo Nabaddoon Muuse Maxamuud Rooble (Muuse Ilka-weyne), waxaa kale oo la dilay Xildhibaan Cabdi Qaadir Qaasim Mursal iyo Maxamad Cumar Hagafeey iyo dad kale oo askar iyo ergo u badnaa.
Bisha MaarsoQaraxyada dhacay waxa ugu waaweynaa,March 13, 2017waxaa Muqdisho dhacay Labo, Qaraxii Koowaad Warshaddii Nacnaca iyo mid kale oo ka dhacay waddada Makka Al-mukarrama, labadaba waxaa ku dhintay 11 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 qof.
March 21, 2017waxaa uu qarax kale ka dhacay afaafka hore ee Xarunta Golaha Murtida & Maddadaalada ee National Theatre, 5 qof ayaa ku dhimatay, halka 21 kalana ay ku dhaawacantay.
Bisha April,Qarax ka dhacay kuliyadda Jaalle siyaad 9-kii bisha waxaa ku dhintay 19 qof, qarax kale oo Wadajir ka dhacayApril 10, 2017 waxaa ku dhimatay4, 9 kalana dhaawac, mid kale oo ka dhacay nawaaxiga xarumaha wasaaradaha ciyaaraha iyo amniga ee dowladda Soomaaliya 5 ayaa ku dhimatay.
Bisha Septemberwaxaa aad u badnaa dilal qorsheysan sida Sarkaal ka shaqeynayey Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde, General Cabdulle Maxamed Sheekh Quruurux, oday lagu dilay degmada luuq oo ahaa Xuseen Maxamuud Faarax (Xuseen Dhafoor)
Bisha Octoberwaxaa dhacay qaraxii ugu khasaaraha badnaa Afrika, October 14, 2017 Qarax Ka Dhacay Zoobe, dhimashada waxaa lagu sheegay illaa 500 halka dhaawaca intaasi ka badan yahay, waxaa kale uu geystay khasaare maaliyadeed.
Bisha Novemberwaa bishii ugu deganeed bilaha sanadka gaar ahaan Muqdisho,waxaa jiray qarax ka dhacay 2dii bisha degmada Hodan khasaare badan kama dhalan, qaraxyo kale oo qaar saraakiil loogu xiray ayaa jiray, Gashaanle Maxamed Yuusuf Cali oo lagu dilay Degmada Yaaqshiid, Xildhibaan Maxamed Cabdi Guuleed ayaa isna la dilay iyo khasaare ka dhashay duqeyn Mareykanka ka fuliyeen meel ku dhaw Daaru Salaam
December 17, 2017:Waxaa goor habeen ah gurigiisa lagu weeraray siyaasiga mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, 5 ilaaladiisa ka tirsan ayaa la dilay isagana waa la dhaawacay.
February 2,2017: Xooggaga Ururka Al Shabaab, ayaa goor habeen ah weerar ku qaaday Deegaanka Carabiya, oo ka tirsan Degmada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya, dadka deegaanka ayaa sheegay in Shabaabku ay weerarkaasi ku dileen 15 ka mid ah Ciidamada Booliska, sidoo kalena ay gubeen gaari ay askartu laheyd.
April 30, 2017:Ururka Al Shabaab oo dagaal qorsheysan ku qaaday Waajid ee Gobolka Bakool ayaa sheegtay guulo, waxaa goobta la weeraray joogay ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamada Itoobiya.
August 27, 2017:XoogaggaAl shabaabayaa weerar culus ku qaadey Fariisimo Ciidamada Midowga Africa, ee AMISOM ku leeyihiin deegaanka Golweyn .
September 3, 2017:Alshabaab ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidammada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Buulo-Guduud oo qiyaastii 30 km dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo.
Xigasho: - Goobjoog News